यी निर्देशक जो प्रेममा जत्तिसुकै असफल भएपनि हिरोइनको भाग्य चम्काउन जुटिरहे!
एजेन्सी, लाइट, क्यामेरा र एक्सन भन्ने निर्देशक पुरै फिल्मको क्याप्टेन हुने गर्दछ। अधिकांश निर्देशक आफ्नी हिरोइनको प्रेममा पर्ने गर्दछन्। धेरै निर्देशकले हिरोइनसंग विवाह गरेर घरबार बसाए भने धेरैले उनीहरुसंग सम्बन्ध तोडे। हिन्दि फिल्म इन्डस्ट्रीको सुन्दर हिरोइनहरुप्रति धेरै निर्देशकहरु फिदा भएका छन्। केहि निर्देशक भने प्रेममा जत्तिसुकै असफल भएपनि आफुलाई मनपर्ने हिरोइनको भाग्य चम्काउन जुटिरहेका छन्।
राज कुमार – संतोषी मिनाक्षी
निर्देशक राज कुमार पनि सन्तोषी मिनाक्षीको मायामा यति सम्म डुबेका थिए कि उनको आखा मिनाक्षीबाट हट्दैन थियो। घायल फिल्मको सफलतापछि राज कुमारले मिनाक्षीलाई प्रपोज गरेका थिए तर मिनाक्षीले उनको प्रपोज अस्विकार गरिन। यसको बावजुद पनि मिनाक्षीको साथ राजकुमारले धेरै फिल्ममा कम गरे।
उर्मिला – राम गोपाल वर्मा
राम गोपाल वर्मा रंगीला गर्ल उर्मिलाको प्रेममा परेका थिए । उर्मिलालाई उनको जीवनको सबैभन्दा बढि हिट फिल्म दिने निर्देशक पनि राम गोपाल नै थिए। उर्मिलालाई राम गोपालले आफ्नो धेरै फिल्ममा कास्ट गरेका कारण उनलाई राम गोपालकी केटि भनेर बोलाइन्थ्यो। उर्मिला धेरै वर्षसम्म रामको मनपर्ने अभिनेत्री थिइन्। चलचित्र रंगिला बाहेक सत्या, कौन, जंगल’, मस्त दौड र भूत जस्ता फिल्ममा रामले उर्मिलालाई हिरोइन बनाएका थिए।
राम धेरै समयसम्म उर्मिलासंगै देखिएका थिए। यतिसम्म कि रामकी पत्नीले उर्मिलालाई थप्पड समेत हानेकी थिइन्। तर उर्मिलाले भने आफु रामसंग अफेयरमा नरहेको भन्दै मिडियासामू झुट बोल्दै आएकी थिइन्।
प्रकाशित : बुधबार, जेठ ३०, २०७५१८:२७
चलचित्र ‘रेस ३’ ले रिलिज नहुँदै राख्यो यस्तो नयाँ रेकर्ड! अमि खानरको दंगल पनि पर्यो पछाडि